२०७७ असोज ८ बिहीबार ०६:५४:००
भगवान् एक सन्तको ठूलो तपस्याबाट खुसी भएर साक्षात् उनका अघि प्रकट भएछन् । प्रसन्न भगवान्ले सन्तलाई वर माग्न अनुरोध गरे । सन्तले भगवान्सँग प्रश्न राखे, ‘भगवान्, यो स्वर्ग र नर्कमा यति धेरै भिन्नता किन छ ? किन दुवैलाई उस्तै बनाउन नसकिएको । यसबारे जान्न चाहन्छु ।’ सन्तको यस्तो प्रश्न सुनेपछि भगवान्ले सन्तलाई भने, ‘लौ हिडँ, म तिमीलाई प्रत्यक्ष स्वर्ग र नर्क देखाउँछु ।’
सुरुमा भगवान्ले सन्तलाई नर्क लगे । नर्कमा उनीहरू पहिले एक विशाल भोजनकक्षमा पुगे । त्यहाँका बासिन्दा खानाले भरिएको एउटा विशाल खड्कुँलो वरिपरि बसिरहेका थिए । सबै एकदम दुब्ला, कुपोषण लागेकाजस्ता देखिन्थे । प्रत्येकको हातमा कसिलो गरी भीमकाय डाडु बाँधिएको थियो । त्यसमा खाना त उठाउन सकिन्थ्यो, तर मुखसम्म पुर्‍याउन सकिँदैनथ्यो । यसले गर्दा सबै भोकै थिए । सबैको अवस्था भयावह थियो ।
यो देखेर सन्तले भगवान्सँग त्यहाँका बासिन्दाका हातमा त्यत्रो डाडु बाँधेर अन्याय भएको गुनासो गर्न थाले । जवाफमा भगवान्ले भने, ‘यसको जवाफ दिनुअघि म तिमीलाई स्वर्ग पनि देखाउँछु ।’ दुईजना स्वर्ग पुग्दा त्यहाँ पनि खाने समय भएको थियो । नर्कमा जस्तै यहाँ पनि उस्तै भोजन कक्ष, उस्तै टेबल थियो ।
यहाँसम्म कि खानाको वरपर बसेका मानिसको हातमा उस्तैगरी भीमकाय डाडु बाँधिएका थिए । तर, यहाँ भने सबै खुसी र हृष्टपुष्ट देखिन्थे । स्वर्गवासीले हातमा बाँधिएको डाडुको सहयोगले एक अर्कालाई खुवाइरहेका थिए । यो देखेर सन्तको मनमा केही बत्ती बलेजस्तो भयो । खासमा स्वार्थीपनले कुनै पनि स्थान नर्क बनाइदिनेरहेछ भने सहयोगीपनले स्वर्ग ।
भिन्न शैलीको काम
पेचकस र अस्थि
को शक्तिशाली ?
दसैँँ मान्न आउनेमा कोरोना, जोखिममा गाउँ